Dareemida cagaha gubashada: 5 dawooyinka dabiiciga ah - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Dareemida Gubashada: 5 Daawooyinka dabiiciga ah - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Dareenka gubashada ee cagaha waa a Calaamadaha caadiga ah ee dhaawacyada oo saameeya nerves ee lugaha iyo cagaha.
Guud ahaan, calaamadahan waxay saameyneysaa bukaannada qaba xanuunka macaanka ee sonkorowga. Laakiin calaamaddan ayaa sidoo kale muujin karta yaraanta nafaqada, muruq miisaan ama infakshan, iyo kuwo kale.
Iyadoo ku xiran sababaha hoose, raaxo-daradu waxay noqon kartaa mid khafiif ah ama daran. Calaamadaha kale waxaa laga yaabaa inay la socdaan dareenka gubashada cagaha: tingling, kabuubis ama caabuq, iyo kuwo kale.
Nasiib wanaag, waxaa suurtagal ah in la yareeyo calaamadaha aan fiicneyn ee ay ugu wacan tahay xalalka dabiiciga ah ee asal ahaan keenaya dareen yar.
Waxaan halkan ku bixinnaa shan dabeecadood oo dabiici ah. Marka ay tijaabinayaan, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo sababaha asaasiga ah ee dhibaatada. Diyaargarowga dabiiciga ah wuxuu u dhaqmaa sidii quwad-beeleed, laakiin mararka qaarkood daaweyn kale waa loo baahan yahay.
Haddii dareenka gubashada ee cagaha uu la xidhiidho sonkorowga macaanka, caabuq ama cudur ku dhaca dareemayaasha, la tasho dhakhtar.
Dhinaca kale, haddii dhibku yahay natiijada muruqyada culus, culeyska ama xirashada kabaha aan habooneyn, waxaad tijaabin kartaa bedelka dabiiciga ah adigoon mushkilad lahayn. Qaado warqado!
1. Cusbada Epsom
Cusbada Epsom waa mid ka mid ah daaweynta dabiiciga ah ee ugu badan ee la isticmaalo si loo kabo muruqyada cagaha.
Qubeyska leh cusbada Epsom waa daweyn dabiici ah si loo yareeyo xanuunka iyo dareenka gubashada cagaha. Waad ku mahadsan tahay saameynteeda nasashada, daweyntan ayaa ku habboon in la yareeyo khaladka sababay dhibaatooyin dareemayaasha, muruqyada iyo wareega wareegga.
Marka hore, ku dar koobka 1 / 2 ee cusbada Epsom ilaa berkedda biyaha kulul.
Ka dibna cagahaaga ku qoyso shan iyo toban ilaa labaatan daqiiqo. Digniin: Ka hor intaadan ku dhexjirin berkedda, hubso in heerkulku uu u adkeysan karo maqaarka!
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiisaynayso: Miyaad leedahay cagahaaga? Soo hel xalkan 100% dabiiciga ah
2. Saliid saytuun ah
Masraxyada ku yaalasaliida saytuunka ku istaag liistada liiska daawooyinka dabiiciga ah si ay u calaamadiso astaamaha xun ee cagaha.
Inkasta oo saliid saytuun ah ay tahay alaab inta badan loo isticmaalo ujeedooyinka nafaqada, saliideedu sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin daaweyneed. Codsiga dibedda ah wuxuu dejin karaa muruqyada. Waxa kale oo ay ka caawineysaa in ay la dagaallanto barar iyo qashin.
Ugu horeyn, kululee laba saliid saytuun ah oo udub dhexaad u ah heerkulka ku habboon adoo codsanaya maqaarka.
ka dibna saliida cagahaaga saar oo cagahaagana duugo: samee dhaqdhaqaaqyo qoto dheer leh. Tan samee tobanka daqiiqo, ka dibna naso.
Haddaad rabto, samee tan habeyn kasta ka hor intaadan sariirta aadin.
Ha ahaato iyada saliidaha lagama maarmaanka ah ama geedka laftiisa, ogoow inaga oo leh saameyno ka hortag ah oo ka hortag ah. Sidaas awgeed waxay u fududeyn kartaa dareenka gubashada cagaha.
Thyme waxaa ku jira timolol, walax oo ficilkiisu hoos u dhigo xanuunka wadajirka, xannibaadda iyo inflammations.
Haddii aad ku xanuunsato dareenka gubashada cagahaaga, ha ka waaban inaad isticmaasho saliidda lagama maarmaanka ah si aad u buuxiso daaweyn suurtogal ah.
Marka hore, ku dhex daadi biyo karkaraya, ku dar milix cusub.
Ka dibna dabool ku rid digsiga ha fadhiisan ilaa dareeraha ku jira heerkul macquul ah maqaarka.
Hada waxaa la joogaa wakhtigii lagu shubi lahaa dareeraha biyo diiran.
Marka la sameeyo, cagaha ku qulqulaya illaa labaatan daqiiqo.
Haddii aad rabto, ku dar dhawr dhibcood oo saliidda lagama maarmaanka ah (waxaan kugula talinaynaa inaad ku darto shan) oo cagahaagana duug.
4. Saliida lagama maarmaanka u ah karka
Waad ku mahadsan tahay waxyaabaha muhiimka ah ee ku jira Omega-3 asiidh dufan ah iyo antioxidants, saliida lagama maarmaanka ah ee kaxda waxaa si degdeg ah loo tixgeliyey saliid nafsadeed.
Isticmaalka miisaanka loo yaqaan 'flax essential oil' wuxuu xakameynayaa waxqabadka nidaamka dareenka, wuxuu hagaajiyaa socodka dhiigga wuxuuna yareeyaa bararka.
Ugu horeyn, ku shub qaado qaado oo ah saliid lagama maarmo ah gacmahaaga.
ka dibna xoqin gacmahaaga, kadibna cagahaaga ku dhaji ilaa 10 daqiiqo.
Hadda waa waqtiga nasashada.
5. Biyo kulul iyo biyo kulul
Waxaanu dhameynaa liiskan daaweynta dabiiciga ah si loo yareeyo dareenka gubashada cagaha iyadoo la isticmaalayo bedelka aasaasiga ah oo la gaari karo dhammaantood: biya qabow iyo biyo kulul.
Isbeddelada kululeeyaha waxay kaa caawineysaa inaad qandaraas geliso oo aad nasiso murqaha, sidaas darteed dhiirigelinta nasasho fiican. Daaweynta fudud ee fudud waxay u fiican tahay murqaha, jilicsanaanta iyo dareemayaasha ka dib waxqabadyo isboorti ama waxqabad kasta oo xoog leh.
Markaad dareentid dareenka gubashada cagahaaga, cagahaaga ku qoy biyo qabow. Sug saddex daqiiqo.
Marka muddada cayiman ee la cayimay, Cagahaaga ku qoy biyo qabow.
Ku celi labada falba laba ama seddex jeer isku xiga illaa gargaarka.
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiisaynayso: Talooyinka 5 si looga fogaado xanuunka lugaha ee kabahaaga cusub
Isticmaalka daawooyinkan dabiiciga ah ee ka yimaada dareenka gubashada iyo calaamadaha kale ee aan fiicnayn ee cagaha ayaa hore loo xaqiijiyay. Guud ahaan, daaweynahan waa ku filan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii calaamadaha ay sii wataan ama ka sii daraan, waxaa fiican inaad la tashato dhakhtar sida ugu dhaqsaha badan, gaar ahaan haddii aad leedahay calaamado kale.
Astaamahan kale waxaa laga yaabaa inay yihiin boogaha, boogaha furan, dareemid gubasho oo xoog leh, dareen gubasho oo lug ku leh lugta, dareenka weyn ee faraha ....
Baro sida loo daaweeyo infakshanka fungal ee cagaha iyadoo la adeegsanayo daaweynta guriga
Baro sida loo daweeyo infakshanka fungal ee cagaha iyadoo la adeegsanayo daaweynta guriga, si wax ku ool ah looga tirtiro dhibaatadan oo noqon karta mid dhib badan. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/sensation-de-brulure-aux-pieds-5-remedes-naturels/